Manchester City oo Wadnaha Farta ku heysa – Gool FM
Manchester City oo Wadnaha Farta ku heysa
(England) 02 Nof 2018. Manchester City ayaa wadnaha farta ku heysa kaddib markii uu dhaawac horleh garoonka uga baxay De Bruyne kulankii xalay ay 2-0 uga adkaadeen Fulham tartanka Carabao Cup.
Xiddiga qadka dhexe ee reer Belgium oo dhawaan uun ka soo laabtay dhaawac daran oo jilibka lugta midig ayaa u muuqday mid xanuun ku dhagan yahay mar uu garoonka ka baxayay kaddib dhaawac kale oo ka soo gaaray jilibka bidix.
Man City ayaa rajeynaysa in dhaawaca uu markan ku baxay xiddigooda uu noqon doono mid yar.
Tababare Pep Guardiola oo wax laga waydiiyay xaalkiisa ciyaarta kaddib ayaa sheegay in dhakhaatiirtu ay qiimeeyeen xaaladiisa isla markaana uusan isagu waxba ka ogeyn waqti xaadirkan.
De Bruyne ayaa tababarka ku soo laabtay bilowga bishii hore isagoona ciyaaray kulankiisii ugu horreeyay dabayaaqada bishaas kaddib markii uu dhaawac ka gaaray jilibka lugta midig mar uu qeyb ka ahaa tababarka Man City Bishii Agoosto.
Xavi Hernández oo ku dooday in Barcelona ay sameyn karto arintan muhiimka ah
Antoine Griezmann oo raajeenaya in uu ku garaaci doono xidigaha Ronaldo iyo Messi abaal marinta Ballon d'Or